Archive du 20200127
Andry Rajoelina Raha serasera aloha dia hainy
Raha tamin’ireo filoham-pirenena nifandimby teto amin’ny firenena aloha dia i Andry Rajoelina no tena nahay niserasera be indrindra. Izy rahateo moa nitantana orinasa mpanao dokambarotra.
Bas Mangoky homena ny Arabo Hitory any amin’ny Tribonaly Iraisam-pirenena ny mpanohitra…
“Tsy mitovy ny firesaky ny olom-panjakana. Iza marina ilay Elite Agro LLC fa arabo foana no mody resahana ?”,
Edito Inona ilay tokony ho nohenoina ?
“800fmg ny 1FF tamin’ny fitondrako”, “raha nihaino ny teniko tsy ho toy izao mihitsy ny firenena”.